China okpomọkụ transmitter Manufacturer - Quality okpomọkụ transmitter Okwu - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Okpomọkụ mmetụta > okpomọkụ transmitter
Ntinye na-ebunye okpomọkụ
GL-136FTWD ntinye ụdị ụdị ntanetị ọkụ na-egosi ihe eserese site na ntinye na kọmpat, GL-136FTW Ọ na ọtụtụ-eji maka okpomọkụ-eji dị otú ahụ na ......
Digital okpomọkụ transmitter
Integrated okpomọkụ Transmitter Bọmbụ na-Gosiri Type Product arụmọrụ: The integratemperature transmitter na-ekewet nke okpomọkụ ihe mmetụta (thermocouple ma ọ bụ thermal resistor) na abụọ-wiretemperature transmitter modul. Ngwaahịa ahụ na - ejikọ ọnụ akara ọkụ, mgbapụta mgbaàmà ...
Igwe na-ekpo ọkụ bụ otu ụdị temometa nke ọtụtụ ebe, enwere ike ịgwọ ya dị ka temometa ọkọlọtọ. Tumadi gụnyere pt100, pt1000, Cu50, Cu100 iche, nwere ike ịbụ nzukọ na n'ọbọ owuwu. Maka iguzogide platinum, nke kachasị dị elu bụ ± 0.1â „ƒ (AA klas), nke kachasị eji okpomọkụ bụ 600â„ .N'ihi na nguzogide ọla kọpa, nke kachasị zie ezie bụ ± 0.3â „ƒ, nke kacha dị na iji okpomọkụ bụ 150â„. A na-etinye nguzogide na-ekpo ọkụ nke nwere oke ziri ezi na ọnụ ala, tinye ya n'ọrụ maka ụdị usoro mmepụta ọrụ nke dị n'okpuru 500â ƒ.
PLC Intelligent Display njikwa Na 485 Commun
Onye na-ahụ maka ihe ngosi na-egosi na ọ bụ ụdị ọhụụ dị iche iche na-eme nchọpụta nke ọma ma mepụtara site na ịmebata teknụzụ mba ọzọ dị elu ma na-elekwasị anya na mkpa nke ụlọ ọrụ hydropower. Izi ezi, mgbochi nnyonye anya, ọgụgụ isi, nkwụsi ike, na ntụkwasị obi nke ngwa ahụ eruola n'ọkwa dị elu nke ụwa, ọ nwere ike dochie ihe njikwa ngosi dị na mba.
Bọmbụ gbawara agbawa Gosiri na okpomọkụ njikwa Transmitter
Mgbawa-ụdị Pt100 okpomọkụ N'ịchọta mmewere adopts laser ịgbado ọkụ technology iji gbochie solder nkwonkwo si atọpụ ma ọ bụ ịdapụ bụrụ na nke ike vibration, nke ihe n'ụzọ dị irè mma na nkwụsi ike nke mmụba. Ọ nwere ike igosi data okpomọkụ na ọnọdụ, ọ nwekwara ike nyochaa ma chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ na sistemụ kọmputa. Site na ngosipụta ọkụ ọkụ ọkụ, modul transmitter na-eduzi nhazi usoro maka mgbaàmà ahụ. Proofdị ihe mgbawa na-akwado GB3836.1 - 2000 na GB3836.2-2000, ma enwere ike iji ya n'oge ngosipụta mgbawa akọwapụtara.
Ngwaahịa a bụ ụdị ihe nkenke nwere ọgụgụ isi na-ebufe ọkụ. Ọ na-anata ntinye 2, 3 na 4-waya Pt100 na-eguzogide nrụpụta ọkụ, na-eduzi nhazi usoro maka akara mgbaàmà na ntinye 4-20mA ọkọlọtọ ọkọlọtọ. Ọ nwere ọrụ nke ihe mmetụta sensọ na-emeghe mkpu nsogbu.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta okpomọkụ transmitter na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo okpomọkụ transmitter dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.